Maxay Tahay Sababta Ganacsigu Ugu Adeegsanayo Fiidiyow Suuqgeynta | Martech Zone
Maxay Tahay Meheraddaadu Inay Ugu Adeegsato Fiidiyow Suuqgeynta
Talaado, September 15, 2020 Sabtida, Janaayo 23, 2021 Douglas Karr
Waxaan ku soo kordhinay dadaalkeena fiidiyowga halkan Martech waana wax weyn great si qoto dheer uga hawlgalaya Youtube iyo warbaahinta bulshada leh 1 illaa 2-daqiiqo Clips Suuqgeynta.
Nasiib darrose, weli way badan yihiin khuraafaadka halkaas ka jira ee la xiriira kharashyada iyo dadaalka loo baahan yahay si aad u soo saarto fiidiyowyo kuu gaar ah oo loogu talagalay dadaalka suuq-geynta. Inta ugu wanaagsan oo dhan, uma baahnid inaad ka shaqeysid dhammaan caqabadaha tiknoolajiyada - waxaa jira fursado aad u fiican martigelinta fiidiyowga hadda la heli karo.
Fiidiyowyadu waa kuwo aan la adeegsan, taas oo ka dhigaysa maal-gashiga ugu fiican ee shirkaddaada maadaama tartamayaashaadu aysan ka faa'iideysanayn laakiin ay tahay wadista kaqeybgal la yaab leh iyo tirooyinka beddelashada. Daawashada fiidiyowga moobiilka ayaa sii kordhaya sida shaashadaha quruxda badan iyo bandwidth u oggolaadaan saacado daawasho shaqsiyeed. Fiidiyowgu xitaa waa a istaraatijiyad qasab leh marka ay timaaddo emaylkaOo aan taageerin fiidiyowga laakiin wadi kara riixitaanno badan oo badan.
Fiidiyowgu waa mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee fariintaada looga hor marinayo dhagaystayaasha. Infographic-kaan, arag sababta fiidiyowgu u shaqeeyo, iyo sida ugu badan ee looga faa'iideysan karo suuqgeyntaada.
Faahfaahintan ayaa sharraxaysa sababta adiga Istaraatiijiyada suuqgeynta waa inay ka faa'iideysataa fiidiyowyada, halka laga keenayo fikradaha, habka abuurista fiidiyowga, sida loo qaybiyo, waxa sida ugu fiican u shaqeeya, iyo xoogaa talooyin dheeri ah.
Tags: habka abuurista videovideo qaybintafikradaha suuq geynta fiidiyowgatalooyinka fiidiyowgamaxaad u isticmaashaa fiidiyowyadamaxaa video suuq geyn ah
Medallia: Maareynta Khibradda Si Loo Ogaado, Loo Aqoonsado, Loo Sii Sheego, Iyo Arrimaha Saxda Ah Ee Khibradaha Macaamiishaada